Bannaanbax Ka Dhacay Baladweyne Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Bannaanbax Ka Dhacay Baladweyne Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay
Bannaanbax ballaaran ayaa ka dhacay Magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan, waxaana Saaka si weyn looga dareemay bannanbaxaasi Xaafadaha ay ka kooban tahay Magaaladu, iyadoo la arkayay dad Shacab ah oo isugu soo baxay Qaar kamid ah waddooyinka waa weyn ee Caasimadda Gobolka Hiiraan ee Baladweyne.
Bannaanbaxa ayaa waxaa dhigaya dad shacab ah, waxaana ay kaga soo horjeedaan maamulka Hirshabeelle, iyadoo ay ku dhawaaqayaan dadka shacabka ahi Erayo ka dhan ah Maamulka uu hoggaamiyo Cali Guudlaawe Xuseen.
Ciidanka ammaanka ayaa isku dayay in ay ka hortagaan dadka shacabka ah ee dhigaya Bannaanbaxa, waxaana Ciidanku ku guuleysteen in ay meelaha qaar ka kala cayriyaan dadka bannaanbaxayay, wallow Xaafadaha qaar ay si weyn ugu bannaan-baxeen dadku.
Cidanka iyo dadka Shacabka ah ayaa saacado waxaa ay isku hortaagnaayeen Xaafadda Xaawo taako ee Magaalada Baldweyne, iyadoo dadka shacabka ahi ay diideen in ay kala tagaan, bannaanbaxana ay joojiyaan, waxaana la arkayay Ciidanka oo isku dayaya in ay kala Cayriyaan dadkasi caraysan ee bannaan-baxaya.
Waxaa ay wateen dadka shacabka ahi Boorar iyo halku dhigyo ay ku muujinayaan Bannaanbaxooda “Waan kasoo Horjeednaa Caburinta iyo Xasuuqa Maamulka Hirshabelle u Geeystay Shacabka Gobolka Hiiraan, Siidaaya wariyaasha iyo Dadka kale ee ururada Bulshada Rayidla ah” ayaa ku qornayd Boorar ay wateen.
Maqaal horeLaamaha Amniga oo Muqdisho ku qabtay Burcad dhac geysan jiray
Maqaal XigaShirka madasha aragti wadaagga oo maalintii labaad socda